पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन्, तपाइको यो साता कति शुभ ? – हेर्नुहोस् पुस २६ गते देखी माघ ३ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल – Wow Sansar
January 10, 2021 90
मेष : साताको प्रारम्भमा सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । गरीरहेको कार्य परीर्वतनको समेत सम्भाबना रहनेछ । मंगलबार पश्चात भने धार्मिक यात्राको योग रहनेछ । मित्रजनहरुको बहकावका कारण सामान्य झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनहरुको मार्गदर्शन अबज्ञा नर्गनुनै उत्तम रहनेछ । बिहिबार देखि सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । महत्वपूर्ण कार्यहरु हात लाग्ने साथै सहजतापुर्ण ढगंमा सम्पादन हुनेहुदा मान्यजनहरु बाट समेत मानसम्मान प्राप्त हुनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । पुराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहनेछ । योसाताको सुरुमा स्वास्थलाई बिशेष ख्याल गर्नुहोला ।
बृष : साताको सुरुमा पारीवारिक सम्लग्नतामा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ उठाउन सकिनेछ । प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । कार्य क्षेत्रमा भने शारिरीक आलस्यताको प्रभाब पर्नेछ । बुधबार र बिहिबार नयाँ लगानिका निम्ती सजग रहनु पर्नेछ साथै आफज्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्रामा सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्नेछ । खानपानमा बिशेषध्यान पूर्याउनु होला । बिहिबार पश्चात भने मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । नयाँ योजनका साथ प्रारम्भ गरीएका कार्यमा मान्यजनहरुले समेत साथदिनाले कार्यक्षेत्रमा लगनशिलतामा बृद्धि हुनेछ । योसाता यात्राका क्रममा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ सजग रहनुहोला ।
मिथुन : साताको सुरुमा शुभचिन्तकहरुको साथ सहयोगमा बिशिष्ट कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । देशप्रदेशको यात्राको योग रहेकोछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरु बाटभने बिशेष साबधानी अपनाउनु होला । रोकिएर रहेको लगानि उठाउन बिशेष समय रहेकोछ । ब्यपार ब्यवसायमा लगानि बढाउदा उत्तम रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिहिवार पश्चात भने नजिकका आफन्तजनहरुबाट तपाईका कार्यको भण्डाफोर हुन सक्नेछ । साथै स्वास्थमा समेत सामान्य समस्या देखा पर्नेछ अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । भोज भतेर जन्यकार्यमा सहभागीताको योग रहनेछ । यो साता नयाँ लगानि तथा अरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।
कर्कट : गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुनाले कार्य परीर्वतनको सम्भाबना रहनेछ । पठनपाठनमा समय मध्यम रहनेछ । बिशिष्ट ब्यत्तित्वहरुको सहयोगमा आम्दानिका श्रोत मजबुत बनाउन सहयोग मिल्नेछ । सन्तानको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहने समय रहेकोछ । प्रतिश्पर्दा जन्यकार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहने समय रहेकोछ । मनोरञ्जनपूर्ण यात्राको योग बन्नेछ । मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बिहिवार पश्चात भने पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । साजेदारी कार्यमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य घाटाको सम्भाबना रहेकोले सजग रहनु होला । यो साता ब्यापार ब्यवसायमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा उत्तम रहनेछ ।
सिंह : भुमि तथा वाहान खरिद बिक्रीको योग रहनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाईको योग रहनेछ । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्ने खालका कार्यहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेकोछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । नयाँकार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । आम्दानीका बिभिन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । बिहिवार पश्चात भने तपाईको कार्यमा त्रुटि देखाउने हरुको बृद्यिहुनेछ । अरुको बिश्वासमा छोडिएका कार्यमा तपाईलाई अपजसको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकाछ । परीवारका सदस्यहरु टाढाँ भएको महसुस हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा अग्रसर नरहनुनै उत्तम रहनेछ । यो साता अरुको बिश्वासमा स्थीर क्षेत्रमा लगानि नगर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
कन्या : मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा जटीलकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अधिक आत्म बिश्वासका कारण दाजुभाईहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । धार्मिक क्षेत्रको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । मान्यजनहरुको मार्ग अवलम्वन नर्गनाले कार्य क्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीताको अवसर प्राप्त रहनेछ । साताको अन्त्यतिर रचनात्मक कार्यका क्षेत्रबाट सबैको मन जित्न सफल रहिनेछ । आय आर्जनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । साजेदारी कार्यमा सम्लग्न रहनाले दिर्घकालिन आम्दानिका श्रोत फेला पर्नेछन । योसाता मनमा कुनैपनि हालतमा घमण्ड उत्पन्न हुन नदिनु होला ।
तुला : स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम रहनेछ । वाणिका कारण आफन्तजनहरु सगँ सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्ने समय रहेकोछ । कला कौशलका क्षेत्रबाट मनग्य आम्दानि लिन सकिनेछ । नयाँ कार्यहरु प्रारम्भ गर्न बिशेष समय रहेकोछ । मित्रजनहरुको अधिक सामीप्यता त्यति उत्तम रहनेछैन । यात्रामा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रतिक्षीतकार्यको प्रतिफल उत्तम हासिल रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । योसाता खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुनाले बिशेष सजग रहनु होला साथै मित्रजनहरु सगँ सम्पुर्ण मनपेट नखोल्नु होला ।
बृश्चिक : साताको प्रारम्भमा सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । आफनो प्रभुत्व देखाउने उत्तम समय रहेकोछ । कार्यक्षेत्रबाट सबैको मन जित्न सफल रहिनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा जिवन साथीको अग्रसरता उत्तम रहनेछ । प्रतिष्ठीत कार्यहरु सम्पादित रहनाले मान सम्मान प्राप्त रहनेछ । वाणीका कारण आफन्त जनहरु लाई मुग्धगर्न सकिनेछ । संचित रकम खर्चहुनाले सामान्य तनाबको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । भोजभतेरमा सम्लग्न रहने अवसर प्राप्त रहनेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा प्रगाढता छाउनेछ । नयाँ योजनाका साथ कार्य प्रारम्भगरेका खण्डमा दिर्घकालिन आम्दानिको श्रोत बन्नेछ । बल तथा पराक्रमका क्षेत्रबाट ढिलै भएतापनि अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । यो साता गैर ब्यत्तित्वहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।
धनु : साताको प्रारम्भमा देशबिदेशको यात्राका निम्ती समय मध्यम रहनेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । प्रतिपक्षीहरु सवल रहनाले कार्यसम्पादनमा सजग रहनु होला । कारणबश समस्या उत्पन्न हुनाले कार्य थालनीको योजना गोप्य राख्नु उत्तम रहनेछ । प्राकृतिक क्षेत्रमा मन रम्ने समय रहेकोछ । मगंलबार पश्चात नयाँ कार्यको थालनीले आम्दानिका श्रोतहरु सुदृण तुल्याउनेछन ।शारीरिक आलस्यता ताथ मानसिक चन्चलतालाई बशमा राखि गरीएका कार्यले मान सम्मान दिलाउनेछ । बिहिबार पश्चात भने खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । योसाता मंगलबार तथा बुधबार बाहेक अन्य दिन आर्थिक कारोबारमा बच्नु होला ।
मकर : साताको प्रारम्भमा मान्यजनहरुको सहयोगमा आम्दानिका श्रोतहरु सुदृण तुल्याउन सकिनेछ । आफुभन्दा सानासगँ समय ब्यतित गर्दा मनोरञ्जनमुलक रहनेछन । कला कौशलका माध्यम द्वारा मान्यजनहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । बुधबार पश्चात भने गरीरहेका कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुको प्रशन्नताका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहनेछ । नजिकका मित्रजनहरु सगँ मनमुटाबको योग रहेकोले बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । साथै बुधबार तथा बिहिबार आर्थिक कारोबारमा साबधानि अपनाउनु होला । बिहिबार पश्चात आफन्त जनहरुको सहयोगमा पुर्व त्रुटिका कार्यहरु समाधान गर्ने उत्तम समय रहेकोछ साथै सभासम्मेलन जन्यकार्यमा समेत सहभागीताको योग बन्नेछ ।
कुम्भ : तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । कार्य क्षेत्रको लगनसिलताको कदर समेत हुने दिन रहेकोछ । मान्यजनहरुको साथसहयोग मनग्य प्राप्त रहनेछ । आम्दानिका श्रोतहरु प्रयाप्त प्राप्तरहनेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा खर्चिएका समय उत्तम रहनेछ । नयाँ योजनाका साथमा गरीएका कार्यहरु उत्तम रहनेछन तथापी कार्यपुरा नहुन्जेल गोप्य राख्नुउत्तम रहनेछ । बिहिबार पश्चात भने मनोरञ्जनका श्रोतसाधनको खरीदमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा क्षणिक परीर्वतन तथा ढिलाईको सामना गर्नुपर्नेछ । तपाइको कार्यमा हरेक कदममा त्रुटिखोज्नेहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेकोछ । सामान्य यात्राको योग समेत रहनेछ ।
मीन : कार्यक्षेत्रमा गरीएको लापरवाहिले सामान्य अपजस दिलाउन सक्नेछ । मालसामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । यात्रामा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान्यजनहरुको साथसहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । परोपकारिताका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला । सामान्य अप्रिय खबरले मन बिचल्लीत रहनेछ । बिहिबार देखिभने आम्दानिका श्रोतहरु सबल रहनेछन । बिद्यार्थी बर्गका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । आफुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय अन्य ब्यत्तिहरुलाई प्राप्त रहनाले कार्य प्रतिको लगन शिलतामा कमि आउनेछ । परीवारका सदस्यहरुको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछ ।
Prevअत्यन्त दु’खत खबर !! जाकार्ताबाट ५६ यात्रु बोकेर उडेको विमान समुन्द्रमा दु’र्घटना
Next‘अछामको एउटा केटोलाई मैले राजनीतिमा ल्याए, अहिले मान्छे भन्दा कुरा “ठूला’
छातिकाे आकार आफूले चाहेजति पुष्ट बनाउने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु छातिकाे आकार आफूले चाहेजति पुष्ट बनाउने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु छातिकाे आकार आफूले चाहेजति पुष्ट बनाउने यस्ता छन् घरेलु उपायहरु